2010/2012/2015 Election » အို! မြန်မာ!!! – Ohhhh!! Burma!!!	48
မြစပဲရိုး says: အချီကြီး ပါလား ချစ်သောဇီ။
. ထုံးစံအတိုင်း။ အကြွေးသာ မှတ်ပေတော့။ ထိပ်တက်ပြီး အကြွေးခံ နေရတာ တော့ စောဒီး။ ညစာချက်ချိန်။ :-((( lol:-)))))
​ဒေါ် လေး says: မြန်မာပြည်ကြီးမယ် ဥပဒေ အထက်က အဘ နဲ့ ငွေ ရှိတယ်
ခင်ဇော် says: အပြောင်းးအလဲမှာ အစိတ်သားး ဇွတ်ထည့်ထားးမယ့် ကိစ္စ လည်းး
kai says: UMFCCI က.. ဒေါ်ခိုင်ခိုင်နွယ်ရဲ့အင်တာဗျူး.. အခုတင်ပေးမယ်..။
လာလုပ်တယ်ဆိုကထဲက… တခုခု.. တခုခုတော့ရှိမှာပဲလို့.. တွေးသင့်သပေါ့…နော..။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12396
ခင်ဇော် says: အတူတူ အချဉ်သိပ်နေကြတာပေါ့လေ…
Alinsett @ Maung Thura says: .အော် အဘတို့ရယ်. . . .
ခင်ဇော် says: စိတ်ထဲက အဲလိုပဲ ရေရွတ်ပြီးး
ခေါင်မှ မလုံပဲကွယ်.. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8068
မြစပဲရိုး says: ကျန်းမာရေးတော့ ကိုယ့်ဆီကိုယ်ပြန်ပြီး ကုကြလို့ ပြောမလားဘဲ။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12396
ခင်ဇော် says: ဘယ်နေရာမဆို cash basic ဖြစ်နေတာလည်းး
မြစပဲရိုး says: . မြန်မာပြည်မှာ အိမ်ဝယ်ဖို့ ပိုက်ဆံတွေ ဆာလာအိတ်ကြီး နဲ့ ထည့်ပေးတာ မြင်ဖူးကြလားမသိ။
ခင်ဇော် says: ငွေ ပေးး ငွေ ယူ ငွေ လွှဲ ခက်ခဲ တာ တစ်ကြောင်းးးးး တဲ့…
မြစပဲရိုး says: အဲဒီ Seminar က ဘယ်သူတွေ က ဦးစီး လုပ်ပေးတာလဲ။
Ethics မရှိတဲ့ နိုင်ငံ မှာ ဒီ လုပ်ငန်းလုပ်ရင်တော့ သတင်းတွေ က ဟင်းလင်းပွင့်ထွက်ပြီး ကမ္ဘာ့ ဈေးကွက်တောင် ပျက်သွားပါဦးမယ်။ ဘာဘဲ ဖြစ်ဖြစ် နိုင်ငံခြား စီးပွါးရေးသမားတိုင်းကတော့ ၂၀၁၅ အလွန် အတွက် အကွက်ရွှေ့ပုံကို နှစ်မျိုး ပြင်ထားပြီး ဖြစ်မှာပါ။
ခင်ဇော် says: Yangon stock exchange အကြောင်းး ပါးးပါးးလေးးပါတယ်…
မြစပဲရိုး says: . ဒေါ်လာ ၆၀၀ ဆိုတာ နည်းတော့မနည်းဘူး။
ခင်ဇော် says: တစ်ချို့ က International school ဖွင့်ချင်တဲ့ သူတွေ လည်းးပါတယ် အရီးးး
kai says: အခုခေတ်ဗမာ့နိုင်ငံရေးမှာ.. ဒေါ်စုကိုအာဏာရစေချင်ရင်.. အ၀ါဂိုဏ်းကိုစည်းရုံးနိုင်မှဖြစ်မယ်…။
ဟဲ..ဟဲ..ဟဲ…။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12396
ခင်ဇော် says: ပြောသေးးတယ်..
မြစပဲရိုး says: အဲလို ထုတ်တာလဲ သူ့ကိုအမိန့်ပေးသူ ရှိလို့ ပါ ဇီကလေးရာ။
ခင်ဇော် says: အဓိ က က အစိတ်သားး နဲ့ ၂၀၀၈ ဥပဒေ မှန်းး
မြစပဲရိုး says: ဟုတ်သေးပါဘူး။ သူကြီး ဟာက။
ခင်ဇော် says: တရားး ဥပဒေ နဲ့ စီရင်ရေးး အမြင်တွေမှာ
စည်းနဲ့ ကမ်းနဲ့ လစ်​ဘရယ်​ ​ယောကျာ်း says: အတိုက်အခံ မကောင်းလို့ ဖြစ်ရတာ ..
ခင်ဇော် says: အို ဘယ့်နဲ့…
စည်းနဲ့ ကမ်းနဲ့ လစ်​ဘရယ်​ ​ယောကျာ်း says: ဟုတ်ပါ့ဗျာ…
ခင်ဇော် says: Credit to Myoset Min
အောင် မိုးသူ says: မကြီးရေ တွေးကြည့်ရင် အားကိုးစရာဆိုလို့ တစ်ယောက်တည်း ရှိတော့တာလား။ ကျနော်တို့တွေ ရေစုန်မျောတော့မှာလား။ ဥပဒေအထက်မှာ ငွေရှိတယ်ဆိုတာတော့သိပါတယ်။ ဖတ်ရင်း သက်ပြင်းတွေချမိတယ်။
ခင်ဇော် says: နာ တော့ ရေစုန်မြောမှာ အကြောက်ဆုံးပဲ။
ဦးကျောက်ခဲ says: ညှင်း ညှင်း မြန်တျန့်မှာ စီးပွါးရေးလုပ်တယ်ဆိုတာ Pandora Box ကို ဖွင့်ရသလိုပဲ…
အဟတ်… နောက်တခါ ဒါမျိုး Seminar သွားမယ်ဆို ဒေါ်လာ-၆၀၀ စီသာပေး ၊ အောက်လမ်းနည်းတွေ သင်ပေးမယ်… လို့ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12396
ခင်ဇော် says: ဘီစီပေးလိုက်ပြီ။
Wow says: ကျောက်စ်ပြောတဲ့ မြို့လယ်က မဆောက်ရသေးတာ အရင်စိန်ဂျွန်းဈေးနေရာလား.. မင်းဒင်ရဲ့ သက်ခိုင်ထဲမှာ ဖတ်ရတာ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 138
​ဒေါ် လေး says: အဲဒီ မျိုးဆက်ဆိုတဲ့လူ ရေးတာ အရင်ကတည်းက တော်တော် သဘောကျတယ်
ခင်ဇော် says: အရင်က သူရေးတာ ၂ ဖက်ချွန်လိုမျိုးးပဲ။
လုံမလေးမွန်မွန် says: တစ်ခုပဲ သိချင်တယ်.. ကိုယ့်ထက် ဆိုးတဲ့ နိုင်ငံ ရှိသေးလားဟင်င်..
ဆိုးရင်တော့ ဖြေစရာလေး ရမလားလို့.. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12396
ခင်ဇော် says: ဆိုးတာ ကောင်းတာထက်
Mike says: .ကျုပ်က အရင်အစ အလုပ်ရုံနဲ့အလုပ်သမားဥပဒေစစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနမှာ အင်စပက်တာလုပ်ခဲ့တာ
ခင်ဇော် says: လူလည်လူနပ်တွေကကျ သူတို့ကို သက်ဆိုးရှည်စေချင်မှာမို့ မကောင်းပြန်ဘူးးး
ခင်ဇော် says: ဒါမျိုးတွေလေ။
ရေကူး ပြီးတော့ မြကျွန်းသာ၊ ဦးရဲထွဋ်ပဲရှင်းရတော့မယ် (Written by : မာန်သူရှိန်)
ရေကူးအသံလွှင့်စက်ရုံ တင်ဒါကိစ္စကို မေ ၂၇ ရက် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်အစည်းအဝေးမှာ ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယ၀န်ကြီး ဦးပိုက်ထွေးက လာရှင်းတယ်။ ဦးပိုက်ထွေး ရှင်းလင်းတာကို ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးလည်းဖြစ်၊ သမ္မတ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူလည်းဖြစ်တဲ့ ဦးရဲထွဋ်က သူ့ရဲ့ Facebook မှာ ဖော်ပြတယ်။ ဒီလိုဖော်ပြရုံတင်မကဘူး။ ဖော်ပြချက်အောက်မှာ ရှင်းလင်းချက် Comment တွေကိုလည်း ရေးတယ်။ ဒီအခါ နားလည်လိုက်တာက ရေကူးအသံလွှင့်တင်ဒါကိစ္စမှာ ဦးရဲထွဋ်နဲ့ ဦးပိုက်ထွေးက အဓိကတာဝန်ရှိသူ ဖြစ်နေတယ် ဆိုတာပါပဲ။ အစောပိုင်းကတော့ ဒီတင်ဒါခေါ်ယူမှုမှာ ဘယ်သူတာဝန်ရှိသလဲဆိုတာ ဆန်းစစ်ဖို့ ခက်ခဲ့တယ်။ အခုတော့ အဖြေပေါ်သွားပါပြီ။ ပြန်ကြားရေးနဲ့ ရွှေသံလွင်အတွက် ဦးရဲထွဋ်နဲ့ ဦးပိုက်ထွေးတို့ တာဝန်ယူလိုက်တယ်လို့ ယူဆလို့ ရသွားပါတယ်။ နောက်ပြီး ဒီအတွက် စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေ လုပ်ရပါမယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ နိုင်ငံတကာမှာ အဂတိလိုက်စားနိုင်တဲ့ကိစ္စတွေ မီဒီယာပေါ်မှာ ပါလာပြီဆိုရင် စုံစမ်းစစ်ဆေးခံရလေ့ ရှိပါတယ်။ ဒီမှာရော ဘာလုပ်မှာလဲ။ ဦးရဲထွဋ်လို မီဒီယာကိစ္စမှာ နိုင်ငံတကာနဲ့ အမြဲတန်းကိုင်ပေါက်နေတဲ့ သူအဖို့ ဒါကိုပိုပြီး နားလည်ပါလိမ့်မယ်။ ပြောရရင်တော့ အရင်ကလည်း ဦးရဲထွဋ်နဲ့ ကျွန်တော့်ကြားမှာ အမေးအဖြေ စာအသွားအလာရှိဖူးပြီး ဦးရဲထွဋ်ကိုလည်း နာမည်တပ်ရေးဖူးတာတွေ ရှိပါတယ်။ အခုရေးတဲ့ ဆောင်းပါးကလည်း ဦးရဲထွဋ်ကိုပဲ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ တိုက်ရိုက်ရည်ရွယ်ပါတယ်။ ■ နိုင်ငံနစ်နာသွားတာကို ၀န်ခံလိုက်ပါ ၀န်ကြီးဦးရဲထွဋ်ခင်ဗျား၊ ဒုတိယ၀န်ကြီး ဦးပိုက်ထွေးလွှတ်တော်မှာ လာရှင်းတော့ အဓိကအချက်ဖြစ်တဲ့ ကိုယ်ခေါ်ယူလိုက်တဲ့ တင်ဒါစည်းမျဉ်းကြောင့် နိုင်ငံတော် ဘယ်လောက်နစ်နာသွားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကို တိတိကျကျ ပြန်မရှင်းနိုင်ခဲ့ပါဘူး။
ဦးရဲထွဋ်တို့ တင်ဒါစည်းမျဉ်း ထွက်ပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်မှာ ကျွန်တော်နဲ့ သိကျွမ်းတဲ့ လုပ်ငန်းရှင်တစ်ဦးက အခုလိုပြောပါတယ်။ ၀န်ကြီးဌာနပိုင်အဖြစ် ချန်ထားမယ့် မြေဧက ၃၀ ပေါ်မှာ ကျပ်ဘီလျံ ၅၀ မြှုပ်နှံပြီး ၀န်ကြီးတို့လိုချင်တဲ့ လူ ၅၀,၀၀၀ ဆံ့က ဇာတ်ရုံကြီးတွေ မီဒီယာဖွံ့ဖြိုး ရေးလုပ်ငန်းတွေ လုပ်ပေးမယ်၊ ၀န်ကြီးတို့ ပြောသလို အသံလွှင့်ရုံဟောင်းကိုလည်း ရွှေ့ပေးပြီး ဆောက်ပေးမယ်၊ အဲ့ဒါအပြင် နိုင်ငံတော်အတွက် ကျပ်ဘီလျံ ၂၀၀ လောက်တန်ဖိုးရှိတဲ့ လူသောင်းချီနေလို့ရပြီး တိုက်ခန်း ထောင်ချီပါတဲ့ အိမ်ရာစီမံကိန်းတို့၊ စီးပွားရေးဆိုင်ရာ အဆောက်အအုံတို့ ဆောက်ပေးဦးမယ်၊ အဲ့ဒီလို ဆောက်ပေးလိုက်တဲ့အတွက် ဆက်စပ်နေတဲ့ တောင်ဥက္ကလာ၊ မြောက်ဥက္ကလာ၊ မြောက်ဒဂုံနေရာတွေလည်း ပိုပြီးဖွံ့ဖြိုးသွားမယ်၊ ဒါတင်မကသေးဘူး ယာဉ်ကြောကြပ်တည်းမှု မဖြစ်အောင် ဂန္ခမာလမ်းဆုံကို ခုံးကျော် ထိုးပေးဦးမယ်၊ မြောက်ဒဂုံဘက်ကိုလည်း လိုအပ်ရင်သွားရလာရလွယ်အောင် တံတားတစ်စင်း ထိုးပေးဦးမယ်လို့ ကမ်းလှမ်းလိုက်တဲ့အကြောင်း ၀န်ကြီးကို ပြောလိုက်ပါတဲ့။ ဒါတောင် လုပ်ငန်းရှင်တစ်ဦးကပဲ ပြောသေးတာနော်။ ၀န်ကြီးတို့ တင်ဒါစည်းမျဉ်းမှာ ကန့်သတ်ထားတဲ့ မီဒီယာအတွေ့အကြုံတို့ ရုပ်သံအတွေ့အကြုံရှိသူ အထူးဦးစားပေးတို့၊ ဆောက်လုပ်ရေးအတွေ့အကြုံ ရှိတို့ဆိုတဲ့ တစ်စုတစ်ဖွဲ့အတွက်ပဲ ရည်ရွယ်ပြီး ကန့်ထားတဲ့ ကန့်သတ်ချက်တွေဖြုတ်ပြီး အပြိုင်အဆိုင်သာ ၀ိုင်းပေးကြမယ်ဆိုရင် ဒီထက်မက နိုင်ငံတော်က ထပ်ရသွားမှာပါ။ ၀န်ကြီးတို့ ဖြစ်ချင်တာတွေလည်း ဖြစ်ရမယ်။ ကဲ ၀န်ကြီးရေ နိုင်ငံတော်အနေနဲ့ ဘယ်လောက်ရသွားနိုင်မလဲ တွက်ကြည့်ပါဦး။ အနည်းဆုံး ၀န်ကြီးတို့လိုချင်တဲ့ အဆောက်အအုံတွေအပါအ၀င် နိုင်ငံတော်က စုစုပေါင်း ကျပ်ဘီလျံ ၃၅၀ ဖိုးလောက် ရသွားမယ်။
အခု ၀န်ကြီးတို့ တင်ဒါစည်းမျဉ်းအရဆိုရင် နိုင်ငံတော်က ကျပ် ဘီလျံ ၅၀ ၀န်းကျင် ဖိုးလောက်ပဲရမယ်။ ဒီတော့ ၀န်ကြီးတို့ အခုရေးဆွဲခဲ့တဲ့ တင်ဒါစည်းမျဉ်းအရဆိုရင် နိုင်ငံတော်က ကျပ်ဘီလျံ ၃၀၀ လောက် နစ်နာသွားတယ်ဆိုတာ ၀န်ကြီးတို့ ၀န်ခံလိုက်ပါ။ နိုင်ငံတော်နစ်နာစေမယ့် တင်ဒါစည်းမျဉ်းဆွဲခဲ့တဲ့အတွက် နိုင်ငံတော်နဲ့ ပြည်သူကိုလည်း ၀န်ကြီးတို့ လုပ်ကိုင်နေတဲ့ မီဒီယာတွေက တောင် ကြေညာပေးသင့်ပါတယ်။ ဒါကို လက်မခံနိုင်ဘူးဆိုရင် ကြိုက်တဲ့သူကို ခေါ်ရှင်းလိုက်ပါ။ အများထင်နေကြသလို ပေါင်းလုပ်တာ မဟုတ်ဘူးဆိုရင်လည်း ရှင်းလင်းပါ။ ဒီကိစ္စက ရှင်းရမယ့်ကိစ္စဖြစ်သွားပါပြီ။ ဒီအစိုးရလက်ထက်မှာ မရှင်းရင် နောက်အစိုးရလက်ထက်မှာ ဥပဒေကြောင်းအရ စစ်ဆေးခံရလိမ့်မယ်။ စစ်ဆေးတဲ့အခါကျရင်တော့ ဦးရဲထွဋ်က အဓိက တာဝန်ခံရှင်းလင်းရလိမ့်မယ်။ ဥပဒေဘောင်ကျော်တာတွေ ရှိနေရင်လည်း တာဝန်ယူရပါလိမ့်မယ်။ နိုင်ငံနစ်နာစေမယ့်ကိစ္စတွေ မလုပ်ခဲ့ဘူးလို့ ဦးရဲထွဋ်တို့ အာမခံနိုင်ရင် ဒီအစိုးရ လက်ထက် ခေါ်ယူခဲ့တဲ့ တင်ဒါတွေ၊ အများပိုင်တွေကို ငှားရမ်းရောင်းချခဲ့တဲ့ စာချုပ်စာတမ်းတွေ၊ ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ စာချုပ် စာတမ်းတွေ၊ စက်မှုဝန်ကြီးဌာနက ငှားရမ်းထားတဲ့ စာချုပ်စာတမ်းတွေ၊ လယ်ဆည်ဝန်ကြီးဌာနက ငှားရမ်းထားတဲ့ စာချုပ် စာတမ်းတွေ၊ ၀န်ကြီးဌာန ၁၀ ခုလောက်က ငှားရမ်းရောင်းချထားတဲ့ စာချုပ်စာတမ်းတွေ အကုန်လုံးကို အများပြည်သူသိအောင် ထုတ်ပြပါ။ ■ ဦးရဲထွဋ် အာမခံနိုင်လား ဒုတိယ၀န်ကြီး ဦးပိုက်ထွေးက တင်ဒါစည်းမျဉ်းတွေထဲမှာပါတဲ့ စည်းကမ်းချက် အမှတ် ၁၃၊ ၁၄ ကိစ္စကို လွှတ်တော်မှာ အကျယ်တ၀င့် ရှင်းခဲ့ပါတယ်။ စည်းကမ်းချက် အမှတ် ၁၃ မှာ “စီမံကိန်းဧရိယာအတွင်းရှိ အိမ်ရာများ၊ ဆိုင်ခန်းများ၊ ရုံးခန်းများနှင့် မြေများအား အခြားသူတစ်ဦးဦးကို ရောင်းချခြင်း၊ ငှားရမ်းခြင်း မပြုရ” လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒီအချက်ကြောင့် လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့် ရရှိသူဟာ အဲဒီမြေပေါ်မှာပဲ ဆောက်လုပ်ထားတဲ့ လုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်လို့ရတဲ့ ၀င်ငွေကိုသာလျှင် အကျိုးခံစားခွင့် ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ နောက်ပြီး စည်းကမ်းချက် အမှတ် ၁၄ မှာ “စီမံကိန်းဧရိယာအတွင်းရှိ အဆောက်အအုံနှင့် လုပ်ငန်းအားလုံးသည် မီဒီယာနှင့် ပတ်သက်ဆက်စပ်သော လုပ်ငန်းများသာ ဖြစ်ရမည်”လို့ ဆိုထားပါတယ်။ ဒါကြောင့် လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရရှိသူ ဆောင်ရွက်ရမယ့် အဆောက်အအုံများဟာ အခြားအိမ်ရာစီမံကိန်းများလို ခွဲဝေရောင်းချလို့ရမယ့် အဆောက်အအုံများ မဟုတ်ဘူးလို့ ဦးပိုက်ထွေး က ပြောပါတယ်။ ဦးပိုက်ထွေးက လွှတ်တော်မှာ အကျယ်တ၀င့် အဓိကထားပြီး ရှင်းသွားတာက တင်ဒါစည်းကမ်းချက် အမှတ်စဉ် ၁၃၊ ၁၄ နှစ်ခုတည်းပါပဲ။ လုပ်ငန်းလုပ်ခွင့် ရရှိသူဟာ အဲဒီစည်းကမ်းနှစ်ချက်အတိုင်း လုပ်ရမှာပဲလို့ ဆိုလိုချင်ပုံရပါတယ်။ ပြီးတော့ ရွှေသံလွင် တင်ဒါပုံစံမ၀ယ်ရသေးတဲ့ အကြောင်းကိုပဲ ကာကွယ်ပြောသွားတယ်။ တင်ဒါဖောင်ပိတ်ရက် မရောက်သေးပဲ ဒီလိုပြောတဲ့အတွက် ရွှေသံလွင်ဘက်က ကာကွယ်ပေးတယ်လို့ ယူဆစရာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနဲ့ ရွှေသံလွင်အကြား ဆက်စပ်မှုတွေဟာ ဒီအချက်မှာတင် ပေါ်လွင်သလို ဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။ ရွှေသံလွင်ကို ကာကွယ်မယ်ဆိုရင် ဒါတွေကိုလည်း ချပြနိုင်ဖို့လိုပါတယ်။ Sky Net ကို စာချုပ်ချုပ်တုန်းက အခွန် ၃ နှစ် ကင်းလွတ်ခွင့် ဘာလို့ပေးခဲ့လဲ၊ ၀င်ငွေခွန် ကင်းလွတ်ခွင့်ပေးတယ်ထား လုံးဝကင်းလွတ်ခွင့်ပေးလို့မရတဲ့ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ရော သုံးနှစ်အတွင်း ဘယ်လောက်ဆောင်ထားသလဲ၊ ဆောင်ရောဆောင်ထားလား။ Sky Net မဏ္ဍပ်ကနေ စီးကရက်တွေ ကြဲချတာကို ရုပ်သံမှာပါ ဖော်ပြတုန်းက ဘာလို့အရေးမယူခဲ့သလဲ ဖြေကြည့်ပေးပါဦး။
ရွှေသံလွင် ဟာယမကာစက်ရုံ၊ စီးကရက် စက်ရုံလုပ်ငန်းတွေပါ လုပ်ကိုင်ခွင့်ရတယ်၊ ကျိုက်ထီးရိုးတောင်ခြေက မြေဧက ရာနဲ့ချီပြီးရတယ်၊ စစ်တောင်း စက္ကူစက်ရုံကို စက်မှုဇုန်လုပ်ဖို့ ရတယ်၊ လမ်းတံတားလုပ်ငန်းတွေရတယ်၊ ရှမ်းပြည်နယ်ရွာငံမှာ မြေဧက ၁၃၀၀ ကျော် သိမ်းခွင့်ရတယ်၊ နိုင်ငံပိုင်မြေတွေလည်း လုပ်ပိုင်ခွင့်ရထားတယ်၊ ဒီလောက်လုပ်ငန်း ပမာဏကြီးကြီးမားမားတွေရထားတဲ့ ရွှေသံလွင်အနေနဲ့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားတဲ့ ငွေပမာဏအားလုံးဟာ ရလမ်းပြနိုင်တဲ့ငွေတွေ၊ အခွန်ဆောင်ထားပြီးသား ငွေဖြူတွေနဲ့ ကိုက်ညီရဲ့လားဆိုတာလည်း အရင်ချပြနိုင်မလား။ သိရသလောက်တော့ အခုနောက်ဆုံး ထုတ်ပြန်တဲ့ ထိပ်တန်းအခွန်ထမ်း ၁၀၀၀ စာရင်းမှာပဲ ပါလာပြီး အရင်နှစ်တွေက ထိပ်တန်းစာရင်းမှာ မတွေ့ခဲ့ရဘူး။ ပါတယ်ဆိုတာတောင် ဆက်စပ်ပတ်သက် လုပ်ကိုင်နေတဲ့ ကုမ္ပဏီ ၂၀ ကျော်လောက်ထဲ က နှစ်ခုသုံးခုပဲ ပါတာပါ။ ရွှေသံလွင်နဲ့ ပတ်သက်ရင်လည်း အခု အစိုးရလက်ထက် မဟုတ်ရင်တောင် နောင်အစိုးရလက်ထက်မှာပါ ရှင်းလင်းရမယ့်ကိစ္စတွေ အများကြီးရှိခဲ့ပါတယ်။ သူတို့နဲ့ပတ်သက်လို့ရော ဦးရဲထွဋ်တို့ အာမခံနိုင်လား။ လွှတ်တော်မှာ ဦးပိုက်ထွေး ရှင်းခဲ့တာကို အခြေခံပြီး ပြန်မေးရရင် တင်ဒါအောင်ပြီးလို့ စာချုပ် ချုပ်ပြီးတဲ့အခါ အဲဒီစည်းကမ်းချက်အတိုင်း တကယ်လုပ်၊ မလုပ်ဆိုတာကို ဦးရဲထွဋ် အာမခံနိုင်မလား။ မီဒီယာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့၊ မီဒီယာလုပ်ငန်း သီးသန့်အတွက်ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်တပ်ပြီး အခြားစီးပွားဖြစ် လုပ်ငန်းတွေ လုပ်ကိုင်မှာ မဟုတ်ဘူးလို့ ကျိန်းသေပြောရဲသလား။ ဒါ့အတွက် တခြားမကြည့်ပါနဲ့။ ဦးရဲထွဋ်အတွက် အကောင်းဆုံး နမူနာတစ်ခု ပေးလိုက်ပါမယ်။ အဲတာကတော့ ဦးရဲထွဋ်တို့ အစိုးရသစ် လက်ထက်မှာပဲ စာချုပ် ပြန်ပြင်ချုပ်ပြီး စာချုပ်စည်းကမ်းတွေ မလိုက်နာဘဲ အများပြည်သူပိုင်နေရာကို စီးပွားဖြစ် လုပ်ကိုင်နေတဲ့ မြကျွန်းသာ စာချုပ်ကိုသာ ကြည့်လိုက်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ထပ်ထုတ်ပြပါမယ်။ ဒါကိုလည်း ဦးရဲထွဋ်ပဲ ရှင်းရဦးမှာပါ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဦးရဲထွဋ်က သမ္မတရဲ့ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဖြစ်ပြီး အစိုးရ၀န်ကြီးဌာနတွေကိုယ်စား မကြာမကြာဖြေနေတဲ့ အတွက်ကြောင့်ပါ။ ■ မြကျွန်းသာဇစ်မြစ် ၁၉၉၀ ခုနှစ် ၀န်းကျင်လောက်က မြကျွန်းသာကို အပန်းဖြေစခန်းအဖြစ်စပြီး အကောင်အထည်ဖော် လုပ်ကိုင်ခဲ့တယ်။ နောက်ပိုင်းမှာ လုံးဝမကိုက်တော့လို့ ပြန်အပ်၊ အဲ့ဒီကနေ တပ်မတော်လက်ထဲရောက်တယ်။
အဲဒီနစ်နာမှုတွေထဲမှာ အဆိုးဆုံးက ငှားရမ်းခကိုကျတော့ “အများပြည်သူအတွက်” ခေါင်းစဉ်တပ်ထားပြီး မတန်တဆလျော့ပေးထားတယ်၊ တကယ်လုပ်တော့ စီးပွားဖြစ်လုပ်စားကြတဲ့အချက် ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအခါ အများပြည်သူအတွက်ရော၊ နိုင်ငံတော်အတွက်ပါ နစ်နာမှုတွေ ပေါ်လာတယ်။ ■ မြကျွန်းသာမှာ ဘာဖြစ်နေပြီလဲ လက်ရှိ မြကျွန်းသာထဲကိုသာ ၀င်ကြည့်လိုက်ရင် မြကျွန်းသာဟာ အများပြည်သူ အနားယူအပန်းဖြေမှုနဲ့ မဆိုင်တဲ့ ရှော့ပင်းစင်တာတွေ အပြိုင်အဆိုင်တည်ဆောက်မှုဒဏ်ကို ခံနေရတာ တွေ့ကြရမှာပါ။
■ မြကျွန်းသာကို ဘယ်သူတွေ လုပ်နေတာလဲ မြကျွန်းသာကို စာချုပ်ချုပ်ဆိုပြီး အပိုင်းလိုက်ပေးတော့ Magic Land၊ MGS၊ GSB၊ Inya Palace၊ နေလပွင့်၊ ရူဂျီ၊ မက်စ်မြန်မာနဲ့ ဧဒင်ကုမ္ပဏီ ရှစ်ခုက အပိုင်းလိုက်ခွဲပြီး လုပ်ကိုင်ခွင့် ရခဲ့ကြပါတယ်။
ခင်ဇော် says: ■ သမ္မတကြီးရဲ့ ကတိပြု မိန့်ခွန်းတွေ ပြန်သတိရ
ရေကူးအသံလွှင့်စက်ရုံဟောင်းတင်ဒါကိစ္စကို ပြန်ကြည့်ပါ။ ကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့ နိုင်ငံပေါင်းနှစ်ရာကျော်ရဲ့ နှစ်ပေါင်းရာချီတဲ့သက်တမ်းအတွင်းမှာ ဘယ်အစိုးရကမှ ပုဂ္ဂလိကမီဒီယာလုပ်ငန်းတစ်ခုကို မီဒီယာဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာထဲကနေ ဒေါ်လာ သန်း ၃၀၀ အနစ်နာခံပြီး ကူညီခဲ့ဖူးတာရှိသလဲ။
အခုမြကျွန်းသာကိစ္စမှာလည်း ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာဆုံးရှုံးမှုဟာ နှစ် ၆၀ မှာ ဒေါ်လာ သန်း ၃၀၀ တောင်မကပါဘူး။ ခရိုနီစီးပွားရေးစနစ်တွေ ရှင်သန်နေတယ်။ အဂတိလိုက်စားမှုတွေ ပိုများလာတယ်။ ထိန်းမနိုင် သိမ်းမရဖြစ်နေတယ်။ ဒါကြောင့် ငွေကြေးဖောင်းပွမှုတွေ၊ စီးပွားရေးမတည်ငြိမ်မှုတွေကနေ လူထုက စီးပွားရေးကြပ်တည်းလာတယ်။ စီးပွားရေးဆိုးဝါးမှုကြောင့် မကျေမနပ်ဖြစ်မှုတွေ၊ အဲဒီကနေ နိုင်ငံရေးမတည်မငြိမ်မှုကတစ်ဆင့် လာဘ်စား၊ စီးပွားဖြစ်သူ၊ အကျင့်ပျက်အရာရှိတွေ၊ ခရိုနီတွေက သူတို့ရဲ့အပြစ်တွေကိုပျောက်ချင်လို့ ငါးတကာယိုတဲ့ချီး၊ နောက်ဆုံး တပ်မတော်အပေါ်ပုံချလိုက်မှာကို လူထုကစိုးရိမ်နေပါတယ် ဦးရဲထွဋ်ခင်ဗျာ။
ဦးကျောက်ခဲ says: JICA နဲ့ ပါတ်သက်တဲ့ပရောဂျက် တစ်ခုမှာပေါ့…
အဆုံးသတ်တော့ အဲသည့် ဖရီး ထောက်ပံ့ငွေပရောဂျက် ဂိန်းသွားတယ်… အနိစ္စ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12396
ခင်ဇော် says: ဆရာများ သားသေ။
ဦးကျောက်ခဲ says: အခုဟာက ဖရီးထောက်ပံမည့်ဟာကို…
သင်းအတ္တကြောင့် တိုင်းပြည်နာသွားတယ်… Was this answer helpful?LikeDislike 8068
မြစပဲရိုး says: “ရဲရဲ the ဝန်ကြီး” ကတော့ မီရှဲယို နဲ့ ပုံကို ပီတိ ဖြစ်စွာ share ထား တာ တွေ့တယ်။
was detained at immigration at Burma’s main city airport without explanation last June and immediately deported on the first available flight. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 14461
kai says: ပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီကလည်း..မြန်မာပြည်ဝင်ခွင့် ဗီဇာရီဂျက်ထုထည့်လိုက်သေးသဗျ..။
အခုဗီဇာရတာ.. ဘယ်သူ့ကြောင့်လို့..ထင်သလည်း..။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12396
ခင်ဇော် says: အရောင်ရင့် တစ်ခုရဲ့ ကောမန့် မှာ ဖတ်လိုက်ရဖူးးးးး
Ma Ma says: ဒီကအကြောင်းကို အမှန်အတိုင်းသိပြီး အမှန်အတိုင်း ပြောတာမို့ ဒီကိုလာပြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံချင်တဲ့သူတွေအတွက်တော့ တကယ့်ကို ပေးရတာနဲ့တန်အောင် သတင်းအချက်အလက်တွေ ရလိုက်တာပဲလို့ ပြောရမယ်။
နောက်ရေးလာမယ့်အကြောင်းတွေကို စောင့်နေမယ်။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12396
ခင်ဇော် says: ချစ် မ ရေ,
ဦးကြောင်ကြီး says: တနေ့ကလှုပ်တဲ့ စင်ကာပူမွတ်သမီးအသင်းပွဲမှာ ထင်ရဲ့…။ ဂုံပုပါဒယ် ယာဆွိမင်.. ဆလုံမာယေးကွမ်း
ခင်ဇော် says: ဟုတ်တယ် လေ..